Faroole oo ka soo horjeestay in wax ka badal lagu sameeyo dastuurka Puntland | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Faroole oo ka soo horjeestay in wax ka badal lagu sameeyo dastuurka Puntland
Baladweyne(HNN)Madaxweynihii hore ee dowlad gobolleedka Puntland islamarkaana ah xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole ayaa ka soo horjeedsatay in la furo ama wax ka badal lagu sameeyo dastuurka dowlad gobolleedka Puntland.
Isaga oo ku sugan magaalada Garoowe ayuu sheegay in dastuurka Puntland uusan ku dhisneyn qabiil balse uu ku dhisan yahay nidaam deegaan ama demooyin.
Faroole ayaa ugu baaqay madaxda Puntland iyo odayaasha tabashada muujinaya ka fogaadaan in faragalin ama wax ka badal lagu sameeyo dastuurka.
Shir Madaxeynaha maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali (Gaas) uu ka furay magaalada Garoowe ayaa la shaaciyay in dastuurka wax ku bedel loogu sameynayo, taasoo keenay in uu jawaabtan bixiyo madaxweynihii hore ee Puntland.
”Dastuurkan waligiis waxba lagama badalin lagamana badali doono, Article-ka 60aad waxaa uu sheegayaa in 66kaas qof lama kordhin karo ilaa la sameeyo Afti dadweyne,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Faroole.
Baarlamaanka Puntland ayaa dhawaan kala diray golihii wasiirada maamulka, waxaana uu madaxweynuhu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u soo magacaabayo golle wasiiro.